Iju Egwu mgbawa na-esite na usoro nke Ala Ọma Jijiji
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Iju Egwu mgbawa na-esite na usoro nke Ala Ọma Jijiji
Njem njem • omenala • Enyi nke eTurboNews • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Foto ndị na - abịa site na Iceland gbasara ugwu mgbawa ọhụrụ ook gigantic. Oge a njem ụgbọ elu na-adịgide ma ọ nweghị ihe egwu ọ bụla.
Ihe mgbawa ugwu na Iceland na 40 kilomita n'ebe ndịda nke Isi Obodo Reykjavík
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na-arụ ọrụ nke ọma ma ọnweghị nsogbu ụgbọ elu.
Mgbawa ahụ a na-atụghị anya ya sochiri ọtụtụ usoro nke ala ọma jijiji mpaghara.
Ndị njem nleta ekwesịghị ịnwa ịbịaru ugwu mgbawa ma ọ bụ ịga ebe mgbawa, dị ka gọọmentị Iceland dọrọ aka ná ntị.
Lava na-asọpụta na-ekpuchi mpaghara nke kachasị ihe dị ka mita 500 n'obosara. Ihe mgbawa ahụ na-ejedebe na obere mpaghara na ndagwurugwu Geldingadalir ma o yighị ka ụda mmiri ọ ga-emebi emebi akụrụngwa
Ọrụ mgbawa ugwu na-eme na mgbawa na-agbadata belatara kemgbe ụnyaahụ. Isi iyi lava ndị sitere na windo na-agbapụta agbawa na-esighi ike na ọnụọgụ nke lava pere mpe, ndị Icelandic Met Office (IMO) na-enyocha mgbawa ahụ kọrọ.
Ala ndekọ ala-ala ọma jijiji ndị bu ụzọ mgbawa
N'izu ole na ole nke ala ọma jijiji a na-eme ihe karịrị ala ọma jijiji 50,000 kemgbe 24 February 2021, Iceland's Krysuvik Volcanic System mechara gbawaa. Ọnụ ọgụgụ ala ọma jijiji ndị e dekọrọ n'oge ihe owuwu ahụ bu ugwu ahụ ọgụ bụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ala ọma jijiji n'oge oke ala ọma jijiji nke etinyere na Iceland!
Dabere na Ọfịs na-ahụ Maka Ihu Igwe na Icelandic (IMO), ntiwapụ ahụ malitere na 8: 45pm oge mpaghara na Fagradalsfjall na Geldingadalur. Ebu ụzọ hụ ntoputa ahụ na igwefoto weebụ nke dị nso. IMO gosipụtakwara na ọ gbawara na onyonyo igwe ọkụ.
ugwu ugwu iceland
Fissure ahụ dị na ndagwurugwu ihe dị ka kilomita 4.7 site na ndịda ụsọ oké osimiri nke Peninsula. Grindavik bụ mpaghara kacha dịrị nso nke dị 10 kilomita na ndịda ọdịda anyanwụ nke saịtị ahụ, ma ọ nweghị ebe obibi ugbu a. IMO kwuputara na ihe omimi nke ala na nsogbu nke magma di ala na ubochi ndia. Edekọtara ala ọma jijiji ala n'okpuru Fagradalsfjall n'isi ụtụtụ.